Live Casino Gaming Rules | SBOBET Information Center
Reference Number: AA-00214 Last Updated: 2019-07-15 16:320Rating/ Voters
၃။ ကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုရန် အတွက်သာ
အခြားသောချွတ်ယွင်းချက်များကို မသတ်မှတ်ထားလျှင် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော မည်သည့်ချွတ်ယွင်းချက်များ (ဥပမာ- တိုက်ရိုက်အလောင်းအစားဂိမ်းများ) မဆို၊ မည်သည့်အကြောင်းကြောင့် (ပရိုဂရမ် သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်း)(ဟာ့ဒ်ဝဲ သို့မဟုတ် ဆော့ဖ်ဝဲ) မဆို၊ ပျက်ပြယ်အလောင်းအစားဖြစ်လိမ့်မည်။ မည်သည့်လောင်းကြေးမဆို မည်သည့်ရလဒ်ညွှန်ပြမှုနှင့်မျှ မသက်ဆိုင်ဘဲ မူလလောင်းကြေးအတိုင်း ပြန်ပေးလိမ့်မည်ဟု ဆိုလိုသည်။
၅။ Smart Player and Artificial Intelligence
၆။ တိုက်ရိုက်အလောင်းအစား ဂိမ်းများအတွက် မကျေနပ်ချက်များ တိုင်ကြားခြင်း
အကယ်၍ ကစားသမားတစ်ဦးကကာစီနို တိုက်ရိုက်အလောင်းအစားပွဲရလဒ်ကို မကျေနပ်၍တိုင်ကြားလိုလျှင် (သို့မဟုတ်) အငြင်းပွားလိုလျှင် အော်ပရေတာကိုဆက်သွယ်သည့်အချိန်တွင် အသုံးပြုသူ၏အိုင်ဒီ၊ ကစားသည့်အချိန်၊ ဖဲဝေသူ၏အမည်၊ ဝိုင်းနံပါတ်၊ အလှည့်နံပါတ် များပေးပြီး တိုင်ကြားမှု (သို့မဟုတ်) အငြင်းပွားမှုလုပ်နိုင်သည်။ ထိုသို့ မဆောင်ရွက်နိုင်လျှင် အော်ပရေတာမှမဖြေရှင်းပေးနိုင်သော မကျေနပ်မှုတိုင်ကြားချက်များအဖြစ် ရှိနေလိမ့်မည်။ တိုက်ရိုက်လောင်းကစားသော ကာစီနိုဂိမ်းများအတွက် ဗွီဒီယိုပုံရိပ်များကို (၂၄)နာရီကြာထားရှိမည်ဖြစ်သဖြင့် ကစားသမား များသည် ၎င်းတို့၏ မကျေနပ်ချက်များကို (၂၄)နာရီအတွင်း တိုင်ကြား အငြင်းပွားရမည်ဖြစ်သည်။ (၂၄)နာရီနောက်ပိုင်းမှ ပြုလုပ်လာသော တိုင်ကြားချက်များကို အော်ပရေတာက ဗွီဒီယိုအထောက်အထားမရှိတော့သောကြောင့် ပယ်ချလိမ့်မည်။
မည်သည့်အငြင်းပွားမှုတွင်မဆို ကစားသမားအနေဖြင့် အော်ပရေတာ၏ဆုံးဖြတ်ချက်သည် တရားဝင် နောက်ဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက် ဖြစ်သည်ဟု သိရှိနားလည် သဘောတူရမည်။
အလွန်အကျွံ အမြင့်ဆုံး အနိုင်ဟူ၍ မည်သည့်နေ့တွင်မျှ မရှိပါ။
၁။ တိုက်ရိုက် ဘက္ကရက် ဖဲဝေသူ
၁.၁ တိုက်ရိုက် ဘက္ကရက် ဖဲဝေသူ မိတ်ဆက် / Super Six
The object of the game is to bet on whichever of two hands, the player’s hand or the banker’s hand, that the Player thinks will haveapoint value closest to 9. The Player can also bet onatie.
ဤဂိမ်းသည် ကစားသမားကို ကိုယ်တိုင်အပြင်တွင် ကတ်ကစားနေရသကဲ့သို့သော ခံစားမှုမျိုးကိုပေးသည်။
အချိန်ကာလကြာလာသည်နှင့်အမျှ ဤဂိမ်းသည် ကစားသမားအား ပြုလုပ်ခဲ့သော လောင်းကြေးများစုစုပေါင်း၏ (၉၈.၄၈) ရာခိုင်နှုန်း၏ ပျမ်းမျှကို ပြန်ပေးကောင်းပေးနိုင်သည်။
၁.၂ ပါဝင်ကစားနည်း ညွှန်ကြားချက်များနှင့် အလောင်းအစား ရွေးချယ်နိုင်မှုများ
To placeabet, the Player moves the cursor to the pictures of the chips in the lower-right corner of the game window and left-click the chip value that they want to use. The Player then moves the cursor to the Betting Area on the table layout marked as players or bankers, tie or pair and/or super six, then left-clicks to place their bets. The chip will automatically appear in the betting box, with the total value of the bet written alongside. The bet amount will also appear at the bottom of the window.
တိုကင်တစ်ခုအပေါ်နှိပ်သော လက်ဖ် ကလစ်(Left Click) တစ်ခုစီသည် လောင်းသည့်ပမာဏကို တိုကင်၏တန်ဖိုးအတိုင်း ထပ် ထပ်တိုး သွားမည်ဖြစ်သည်။ ထိုလောင်းကစားပွဲ အတွက် အမြင့်ဆုံးလောင်းကြေးအထိ လောင်းနိုင်သည်။ အကယ်၍ ကစားသမားက တန်ဖိုးမတူညီသော တိုကင်များကို လောင်းရာတွင် အသုံးပြုလိုလျှင် ကာဆာကို ဂိမ်းဝင်းဒိုး၏ ညာ(လက်ယာ)ဘက်အောက်ထောင့်ရှိ တိုကင်ပြားပုံတွင် မိမိ လောင်းလိုသောပမာဏ အသစ်ကိုရွေးပြီး လောင်းကြေးတိုးလာအောင် လောင်းနိုင်သည့်ကစားပွဲ ဧရိယာပေါ်တွင် လက်ဖ် ကလစ်(Left Click)ဖြင့် လောင်းနိုင်သည်။
DOUBLE bet button will enable player to double up all the unconfirmed bets which have been place on the table. Any bet which has been placed and confirmed will not be doubled.ေ
လာင်းထားသောအရာများအားလုံးကို ကစားသမား အကောင့်သို့ အတည်ပြုလိုလျှင် CONFIRM BET ခလုတ်ကို လက်ဖ် ကလစ်(Left Click) (၁)ကြိမ်နှိပ်ခြင်းဖြင့် အတည်ပြုနိုင်သည်။ CONFIRM BET ခလုတ်ကို နှိပ်ပြီးထားသော မည်သည့် အလောင်း အစား မဆို၊ (သို့သော် လောင်းနိုင်သည့်သက်တမ်းမကျော်သေးသော အလောင်းအစားများသာ) ကို လက်ဖ် ကလစ်(Left Click) လုပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး အဲဒီနောက်တွင် CONFIRM BET ကိုနှိပ်ရမည်။ ဤသို့မလုပ်လျှင် ထပ်ပေါင်းထည့်သော အလောင်း အစားများသည် ကစားသမားအကောင့်ထဲသို့ ဝင်မည်မဟုတ်ချေ။
ဇယားပုံမှ လောင်းထားသော အလောင်းအစားများကို ပြန်ပယ်ဖျက်လိုလျှင်CLEAR BETS ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ နောက်ဆုံး လုပ်ခဲ့သည့် အလောင်းအစားကို ပြန်ဖျက်လိုလျှင် UNDO ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ သတိထားရမည့်အချက်မှာ CLEAR BETS နှင့် UNDO ကို CONFIRM BET မလုပ်ခင်အချိန်တွင်သာ အသုံးပြုနိုင်သည်။ အကယ်၍ CLEAR BETSကို နှိပ်လျှင် အဆိုပါ အလောင်းအစားများကို အတည်မပြုတော့ဘဲ ကစားသမား၏အကောင့်ထဲသို့လည်း ထည့်သွင်းတော့မည် မဟုတ်ပါ။ေ
လာင်းရမည့်သက်တမ်း ကုန်သွားသည်နှင့်တပြိုင်နက်ဖဲဝေသူက ကဒ်များကိုဝေမည်။ ကဒ်များအားလုံး၏ မျက်နှာကို ဖွင့်ပြထားသည်။ ကတ်များကို အောက်ပါအစဉ်အတိုင်း ဆွဲယူနိုင်သည်။
ကဒ်ဆွဲသည့် စည်းကမ်းအရ လုပ်လိုလျှင် ကစားသမားအတွက် တတိယကဒ်
ကဒ်ဆွဲသည့် စည်းကမ်းအရ လုပ်လိုလျှင် ဒိုင်အတွက် တတိယကဒ်
(၃)ကဒ် ထက်ပိုသော ကဒ်ဆွဲမှုများကို မည်သည့်ဘက်တွင်မှ မလုပ်ရပါ။
မီနီဘက္ကရက် ဂိမ်းများတွင် (၉) ထက်ပိုသော တန်ဖိုးမရှိပါ။ (၂)ခုထက်ပိုသောကဒ်တန်ဖိုးများ ပေါင်းရာတွင် (၉) ထက်ကြီးသွားလျှင် ပြန်လည်တွက်ချက်သည်။ ကဒ်အသစ်၏တန်ဖိုးကို ကဒ်ပေါင်းသည့်အချိန်တိုင်း (၉)ထက်ကျော်သွားလျှင် (၁၀) ပြန်နှုတ်ခြင်းအားဖြင့် တွက်ချက်သည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော ဥပမာအနည်းငယ်မှ ဤပုံစံအတိုင်း တွက်ချက်ထားသော အီကွေးရှင်းများဖြစ်သည်။
၄ + ၂ + ၆ = ၂
၅ + ၆ + ၈ = ၉
၇ + ၃ = ၀
၁၀ + ၁၀ + ၁၀ = ၀
အမှတ်အများဆုံးရသည့်ဘက်ကနိုင်သည်။ ရှုံးသည့်လောင်းကြေးများအားလုံးကို ရယူပြီး နိုင်သည့်ဘက်ကို ပေးမည်။ အကယ်၍နိုင်ခဲ့လျှင် နိုင်ကြေးများအားလုံးကို ကြွေးကဒ်တွင် ထပ်ပေါင်းထည့်ပြီး ရရှိလာသည့် နောက်ဆုံးလက်ကျန်ကို နောက် ကစားမည့်ဂိမ်းတွင် (သို့မဟုတ်) ဂိမ်းခန်းမသို့ ပြန်ဝင်လျှင် ဖော်ပြပေးသည်။
အကယ်၍ နှစ်ဘက်စလုံး အမှတ်တူလျှင် သရေကျခြင်းဖြစ်ပြီး မည်သည့်ဘက်ကမှ အနိုင် (သို့မဟုတ်) အရှုံးမရှိပါ။ ထိုကဲ့သို့သော ကိစ္စတွင် သရေဖြင့်အနိုင်ဖြစ်သော်လည်း ကစားသမားနှင့်ဒိုင် မနိုင် (သို့မဟုတ်) မရှုံးသောကြောင့် မူလလောင်းကြေးကို ကစားသမားကို ပြန်ပေးသည်။
အချို့သော မီနီဘက္ကရက် စည်းကမ်းချက်များကို အောက်တွင် ရှင်းလင်းချက်အပြည့်အစုံဖြင့် ဖော်ပြထားသည်။
နိုင်ငွေများကို အမေရိက၊ ဥရောပ နှင့် အာရှရှိ အဓိက ကာစီနိုဂိမ်းများတွင် အသုံးပြုသော တူညီသည့်စံအလေးသာမှုများဖြင့် သတ်မှတ်သည်။
နိုင်သည့်ကစားသမားက လောင်းကြေး(၁)ဆကို နိုင်ငွေ(၁)ဆ (ငွေ ဆတူ) ရသည်။
နိုင်သည့်ဒိုင်က လောင်းကြေး(၁)ဆကို နိုင်ငွေ(၁)ဆ (ငွေ ဆတူ) ရသည်။ သို့သော် ကော်မရှင်ခအဖြစ် နိုင်ငွေ၏ (၅)ရာခိုင်နှုန်း အလိုအလျောက်ဖြတ်ခံရသည်။
သရေကျခြင်းကိုလောင်း၍ နိုင်လျှင် လောင်းကြေး(၁) ဆ ကို နိုင်ငွေ(၈)ဆ ရသည်။ သရေကျလျှင် ဒိုင်ဘက်လောင်းသည့် လောင်းကြေးနှင့် ကစားသမားဘက်လောင်းသည့်လောင်းကြေးများကို မူလလောင်းကြေးများအတိုင်း ပြန်ပေးသည်။
ကစားသမားဘက်ကအတွဲလိုက်/ ဒိုင်ဘက်ကအတွဲလိုက် နိုင်လျှင် လောင်းကြေး(၁)ဆကို နိုင်ငွေ(၁၁)ဆ ရသည်။ အတွဲလိုက်နိုင်ရန် ကစားသမား/ဒိုင် ၏ပထမအလှည့်နှင့် ဒုတိယအလှည့်ကို တွဲပေးရသည်။
အနိမ့်ဆုံးလောင်းကြေး နှင့် အမြင့်ဆုံးလောင်းကြေး
အနိမ့်ဆုံးလောင်းကြေး နှင့် အမြင့်ဆုံးလောင်းကြေး ကန့်သတ်ချက်များကို ကစားသမားကဝိုင်းတွင် ထိုင်လိုက်သည်နှင့် ဂိမ်းဇယားရှိ လောင်းကြေးကန့်သတ်ချက်မီနူး (Bet Limits မီနူး) တွင် ဖော်ပြထားသည်။
၁.၃ တိုက်ရိုက် ဘက္ကရက်ဂိမ်း၏ စည်းကမ်းချက်များ
ကစားသမား၊ ဒိုင် စသော အသုံးအနှုန်းများမှာ အလှည့်တစ်လှည့်တိုင်းတွင် ရှိုးမှ ဝေသောကဒ်များကို ကိုင်ကစားသော ဘက်(၂)ဘက်ကို ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကစားသမားသည် ကစားသမားဘက် (သို့မဟုတ်) ဒိုင်ဘက်ကို လောင်းနိုင်သည်။ သရေကျခြင်းတွင်လည်း လောင်းနိုင်သည်။
သဘာဝသည် ကဒ်(၂)ကဒ်ပေါင်း ရမှတ်(၈) (သို့မဟုတ်) (၉) ရခြင်းဖြစ်သည်။ အမြင့်ဆုံး သဘာဝ ရမှတ်မှာ (၉) ဖြစ်သည်။ ကစားသမား(သို့မဟုတ်) ဒိုင်၏ ပထမ (၂)ကဒ်ပေါင်းရလဒ်တွင် ဖြစ်ပေါ်သည်။ ဒုတိယအမြင့်ဆုံးအလှည့်မှာ သဘာဝအတိုင်းရသည် ရမှတ်(၈) ဖြစ်သည်။ သဘာဝ ရမှတ်ရလျှင် နိုင်သူကို သဘာဝအတိုင်းအနိုင်ရသူဟုခေါ်သည်။ သဘာဝ အတိုင်းရလျှင် မည်သူမျှ တတိယကဒ်ကို မရပါ။
နှစ်ဘက်စလုံးတွင် တူညီသော ရမှတ်ရှိလျှင် သရေကျခြင်းဖြစ်လာသည်။
ကစားသမားစုံလိုက် (သို့မဟုတ်) ဒိုင်စုံလိုက်
The first two cards of either the Player or the Banker hand formapair (for example 8,8 or K,K).
၁.၄ ကဒ် တန်ဖိုးများ
(၁၀)ကဒ်များမှလွဲ၍ ပုံကဒ်များ(ဂျက်၊ကွင်း၊ကင်း) နှင့် အေ့စ် များသည့် ၎င်းတို့၏ တန်ဖိုးအတိုင်းဖြစ်သည်။
(၁၀)ကဒ်များနှင့် “ပုံကဒ်များ”ကို (၀)သုည အဖြစ်ရေတွက်သည်။
အေ့စ်ကို (၁) အဖြစ် ရေတွက်သည်။
၁.၅ ကဒ်ဆွဲသည့် စည်းကမ်းများ
ကဒ်ဆွဲသော စည်းကမ်းများတွင် ရွေးချယ်စရာမရှိပါ။ ကဒ်ကို ဆွဲသည်ဖြစ်စေ မဆွဲသည်ဖြစ်စေ အောက်တွင် ဖော်ပြထား သော ဥပဒေသများအတိုင်း ဆုံးဖြတ်သည်။ ထို ဥပဒေသများကို “ကဒ်ဆွဲခြင်း ဆိုင်ရာ ဥပဒေသများ” (သို့မဟုတ်) “Tableau" ဟုခေါ်ပြီး အမေရိက၊ ဥရောပ နှင့် အာရှရှိ အဓိက ကာစီနိုဂိမ်းများတွင် အသုံးပြုသော တူညီသည့်စံအတိုင်း သတ်မှတ်ထားသည်။
ကစားသမားများအတွက် တတိယကဒ်ဆွဲရန် ဆုံးဖြတ်မှုကို စံသတ်မှတ်ထားသည့် ကာစီနို ဥပဒေသများအတိုင်း အလိုအလျောက် လုပ်ဆောင်မည်။
ပထမ (၂) ကဒ်၏ ရမှတ်ပေါင်း
ကဒ်ဆွဲခြင်း (သို့မဟုတ်) စံသတ်မှတ်ချက်
၀၊ ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ဒိုင်တွင် သဘာဝရမှတ်မဖြစ်လျှင် တတိယကဒ်ကိုဆွဲသည်။
၆၊ ၇ ကဒ်မဆွဲပါ
၈၊၉ ကဒ်မဆွဲပါ (သဘာဝရမှတ်)
အကယ်၍ ကစားသမား၏ ပထမ(၂)ကဒ်အတွက် ရမှတ်စုစုပေါင်းသည် (၀) သုညမှ (၅) အတွင်းရှိပြီး ဒိုင်ထံတွင်လည်း စုစုပေါင်းရမှတ်သည် သဘာဝရမှတ်(၈) သို့မဟုတ် သဘာဝရမှတ်(၉) မရှိလျှင် တတိယကဒ်ကို အလိုအလျောက် ဆွဲပေး သည်။
အကယ်၍ ကစားသမား၏ ပထမ(၂)ကဒ်တွင် ရမှတ်စုစုပေါင်း (၆) သို့မဟုတ် (၇) ဖြစ်လျှင် တတိယကဒ်မဆွဲပါ။ စုစုပေါင်းရမှတ် (၀) သုညမှ (၅) အတွင်းရှိသော ဒိုင်က အလိုအလျောက်ဆွဲရလိမ့်မည်။
အကယ်၍ ကစားသမားအတွက် တတိယကဒ်ကို ဆွဲလျှင် ဒိုင်အတွက် တတိယကဒ်ဆွဲရမည့် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အောက်ဖော်ပြပါ စံ ကာစီနို ဥပဒေသများအတိုင်း အလိုအလျောက်ဆောင်ရွက်သည်။
ကစားသမား၏ တတိယကဒ် အောက်ပါ
အတိုင်းဖြစ်လျှင် ဒိုင်က တတိယကဒ်ကို
အတိုင်းဖြစ်လျှင် ဒိုင်က တတိယကဒ်ကို မဆွဲပါ။
၀၊ ၁၊ ၂ ၁၊၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈၊ ၉၊ ၁၀
၃ ၁၊၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၆၊ ၇၊ ၉၊ ၁၀ ၈
၄ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၆၊ ၇ ၁၊ ၈၊ ၉၊ ၁၀
၅ ၄၊ ၅၊ ခ ၁၊၂၊ ၃၊ ၈၊ ၉၊ ၁၀
၆ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၆၊ ၇ ၁၊၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၈၊ ၉၊ ၁၀
၈၊ ၉ ကဒ်မဆွဲပါ (သဘာဝရမှတ်)
ဖဲဝေသူသည် ဂိမ်းများတွင် ဘန်း(burn) ကဒ် မလုပ်ပါ။
အော်ပရေတာတွင် အကယ်၍ ကုလားဖန်ထိုးနေစဉ် လူကြောင့် (သို့မဟုတ်) စက်ကြောင့် အမှားအယွင်းတစ်ခုခုဖြစ်လျှင် ဖဲထုတ်ကို ကုလားဖန်ပြန်ထိုးခွင့်ရှိသည်။
၁.၈ အစုံ လိုက် လောင်းခြင်း
အလောင်းအစားများအားလုံးကို ကစားသမား၏အကောင့်ထဲသို့ထည့်သွင်းရန် CONFIRM ခလုတ်ကိုနှိပ်ရသည်။
တိုက်ရိုက် ဘက္ကရက် စုံလိုက်လောင်းသည့်ဂိမ်းဥပဒေသများသည် ရိုးရိုးဘက္ကရက်၏ ဥပဒေသများနှင့်ဆင်တူသည်။ ကွာခြားချက်တစ်ခုမှာ သင်(ကစားသမား)သည် ကစားသမားဘက် အစုံလိုက်/ဒိုင်ဘက် အစုံလိုက် ကို လောင်းနိုင်သကဲ့သို့ ကစား သမားအနိုင်/ဒိုင်အနိုင် ကိုလည်းလောင်းနိုင်သည်။ အစုံလိုက်နိုင်ရန် ကစားသမား/ဒိုင် ၏ပထမအလှည့် (ပထမကဒ်) နှင့် ဒုတိယအလှည့်(ဒုတိယကဒ်)ကို တွဲပေးရသည်။
နိုင်ငွေမှာ လောင်းကြေး(၁) ဆ နိုင်ငွေ(၁၁)ရသည်။
၁.၉ Super Six
၁.၁၀ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချွတ်ယွင်းမှုများ
ကဒ်ကို ဖဲဝေသူကဖတ်ကြည့်ပြီး ရလဒ်ကို ကစားသမား၏ ကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်တွင် ဖော်ပြသည်။ ဖဲဝေသူက ကဒ်တစ်ကဒ်ကို မကြည့်နိုင်လျှင် ကစားသမားကို ရလဒ်ပြန်ပြရန် ကဒ်ကို ပြန်ဖတ်ရသည်။
အင်တာနက်ကော်နက်ရှင် သို့မဟုတ် ကွန်ပျူတာပြဿနာများအပါအဝင် ကစားသမားစက်၏မည့်သည့် ပျက်စီးမှုကြောင့်မျှ ဂိမ်းကစားသည့်ရလဒ်ကို ပြောင်းလဲ ပယ်ဖျက်မည်မဟုတ်ပါ။ ရီပို့ဆက်ရှင်တွင် ကစားသမားအနေဖြင့် မိမိတို့လောင်းထားသည့် မှတ်တမ်းကို စစ်ဆေးနိုင်သည်။
တိုက်ရိုက်ဘက္ကရက်ကစားနေစဉ် အော်ပရေတာစနစ်၏ မည့်သည့်SBOBET ကာစီနိုစနစ် ချွတ်ယွင်းချက် (သို့မဟုတ်) စက်ပစ္စည်းချို့ယွင်းမှုကိုမဆို ပျက်ပြယ်လောင်းကစားဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ဝိုင်းကိုပိတ်လိမ့်မည်။
၁.၁၁ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချွတ်ယွင်းမှုများ
(၂)ကဒ်(သို့မဟုတ်) (၂)ကဒ်ထက်ပိုသောကဒ်များ မတော်တဆ တဆက်တည်းဝေမိလျှင် လက်ရှိအလှည့်ကို ပယ်ဖျက်ပြီး လောင်းကြေး အားလုံးကို ပြန်ပေးမည့်အပြင် လက်ရှိရှိုးကို ရှိုးအသစ်ဖြင့်အစားထိုးမည်။
ကုလားဖန်ထိုးနေစဉ် ကဒ်တစ်ကဒ် ကို လှန်ပြမိလျှင် ဖဲဝေသူက ရှိုးဘောက်စ်တွင် ပြန်မထားမီ ကဒ်များကို ကုလားဖန်ပြန်ထိုးမည်။
အကယ်၍ ကဒ်သည် စားပွဲပေါ်မှ ပြုတ်ကျသွားလျှင် လက်ရှိအလှည့်ကို ပယ်ဖျက်ပြီး လက်ရှိရှိုးကို ရှိုးအသစ်ဖြင့် အစား ထိုးမည်။
အကယ်၍ ဖဲဝေသူသည် လက်ရှိဂိမ်းပြီးသည့်အချိန်တွင် ကဒ်အပိုဝေမိလျှင် လက်ရှိဂိမ်းရလဒ်ကို တရားဝင်သည်ဟု စဉ်းစားပြီး၊ လက်ရှိရှိုးကို ရှိုးအသစ်ဖြင့် အစား ထိုးမည်။
ကဒ်ကို အနေအထားမှားပြီးထားမိလျှင် ကြီးကြပ်သူက ကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်အရ အနေအထားမှန်အောင်ပြန်ပြင်လိမ့်မည်။
၁.၁၂ မကျေနပ်မှုအပေါ် တိုင်ကြားချက်များ
အကယ်၍ ကစားသမားတစ်ဦးက ကာစီနိုဂိမ်းရလဒ်ကို မကျေနပ်၍တိုင်ကြားလိုလျှင် (သို့မဟုတ်) အငြင်းပွားလိုလျှင် အော်ပရေတာကို ဆက်သွယ်သည့်အချိန်တွင် အသုံးပြုသူ၏အိုင်ဒီ၊ ကစားသည့်အချိန်၊ ဖဲဝေသူ၏အမည်၊ ဝိုင်းနံပါတ်၊ အလှည့်နံပါတ် များပေးပြီး တိုင်ကြားမှု (သို့မဟုတ်) အငြင်းပွားမှုလုပ်နိုင်သည်။ ထိုသို့ မဆောင်ရွက်နိုင်လျှင် အော်ပရေတာမှငြင်းပယ် မကျေနပ်မှုတိုင်ကြားချက်များအဖြစ် ရှိနေလိမ့်မည်။ ကာစီနိုဂိမ်းများအတွက် ဗွီဒီယိုပုံရိပ်များကို (၂၄)နာရီကြာထားရှိမည်ဖြစ်သဖြင့် ကစားသမား များသည် ၎င်းတို့၏ မကျေနပ်ချက်များကို (၂၄)နာရီအတွင်း တိုင်ကြား အငြင်းပွားရမည်ဖြစ်သည်။ (၂၄)နာရီနောက်ပိုင်းမှ ပြုလုပ်လာသော တိုင်ကြားချက်များကို အော်ပရေတာက ဗွီဒီယိုအထောက်အထားမရှိတော့သောကြောင့် SBOBET ကာစီနိုမှ မည်သည့်ရှင်းပြချက်မပေးဘဲပယ်ချလိမ့်မည်။
၂။ တိုက်ရိုက်ဖဲဝေသူ ရိုလတ်
၂.၁ Single zero roulette (ဇီးရိုးရိုလတ်)
Single zero roulette (ဇီးရိုးရိုလတ်)သည် ကျင်း(၃၇)ကျင်းတွင် နံပါတ်(၁)ခုစီတပ်ထားသည့် ဝိုင်းကြီးပတ် လှည့်နေသောစက်ဝိုင်းပေါ်တွင် ဘောလုံးတစ်လုံးကို ကျင်းပေါက်(၁)ပေါက်ထဲသို့ဝင်အောင် လှည့်ရသော ကစားနည်း ဖြစ်သည်။ ဂိမ်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ လှည့်နေသောစက်ဝိုင်းဘီးသည် မည်သည့်နေရာတွင် ရပ်နားမည်ကို မှန်းဆရသော ဂိမ်းဖြစ်သည်။ ထိုစက်ဝိုင်းပေါ်တွင် ကျင်းအကန့်(၃၇) ခုရှိပြီး (၀) မှ (၃၆) အထိ နံပါတ်တပ်ထားသည်။ စားပွဲပေါ်တွင်ပြထားသော နံပါတ်များထဲမှာ နံပါတ်တစ်ခုခုကို (သို့မဟုတ်) အမျိုးမျိုးသောနံပါတ်အုပ်စုလိုက်ကို လောင်း(ထိုး)နိုင်သည်။ သင်မှန်းဆပြီးထိုးသောနံပါတ် မှန်သွားလျှင် နိုင်ငွေ(လျော်ငွေ)ရမည်။ နိုင်ငွေပမာဏသည် မည်သို့ လောင်းသည် ဆိုသော အချက်ပေါ် တွင် မူတည်သည်။
အချိန်ကာလကြာလာသည်နှင့်အမျှ ဤဂိမ်းသည် ကစားသမားအား ပြုလုပ်ခဲ့သော လောင်းကြေးများစုစုပေါင်း၏ (၉၇.၃၄) ရာခိုင်နှုန်း၏ ပျမ်းမျှကို ပြန်ပေးကောင်းပေးနိုင်သည်။
၂.၂ ပါဝင်ကစားနည်း ညွှန်ကြားချက်များ
ကစားသမား၏တိုကင်ကို ဂိမ်းဝင်းဒိုး၏ညာ(လက်ယာ)ဘက်အောက်ခြေတွင် အမျိုးအစားအလိုက် ပုံထားသည်။ လောင်းချင်လျှင် ကစားသမားသည် ကာစာ(mouse pointer) ကို ဂိမ်းဝင်းဒိုး၏ ညာ(လက်ယာ)ဘက်အောက်ထောင့်ရှိ တိုကင်ပြားပုံ (pictures of the chips) တွင် မိမိလောင်းလိုသောပမာဏကိုရွေးပြီး ဘယ်(လက်ဝဲ)ဘက်ကလစ်(Left Click)လုပ်ပါ။ ပြီးလျှင် ကာစာကို ဇယားပေါ်ရှိ မိမိလောင်းချင်သော နေရာပေါ်ရွှေ့ပြီး ဘယ်(လက်ဝဲ)ဘက်ကလစ်(Left Click)လုပ်ပြီး လောင်းနိုင်သည်။ ဤဂိမ်းစနစ်သည် နေရာအနေအထား မမှန်ကန်လျှင် ထိုတိုကင်ကိုလောင်းခွင့်မပြုပါ။ တိုကင်သည် ကာစာအောက်တွင် အလိုအလျောက်ပေါ်နေလိမ့်မည်။ လောင်းသည့်ငွေပမာဏလည်း ဝင်းဒိုး၏ဘယ်(လက်ဝဲ)ဘက်အောက်တွင် ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ထိုနေရာတွင်ပင် ဘယ်(လက်ဝဲ)ဘက်ကလစ်(Left Click) (၁) ခါစီ လုပ်ခြင်းသည် ထိုတိုကင်ရှိငွေပမာဏအတိုင်း ထိုနံပါတ်နေရာအတွက် သတ်မှတ်ထားသော အမြင့်ဆုံးလောင်းကြေး ရောက်သည်အထိ ထပ် ထပ်တိုးနေလိမ့်မည်။
အကယ်၍ ကစားသမားက ပမာဏ မတူညီသော လောင်းငွေတိုကင်ကို ပြောင်းလိုလျှင် ကာစာကို ဂိမ်းဝင်းဒိုး ညာ(လက်ယာ)ဘက် အောက်ရှိ တိုကင်ပုံပေါ်ပြန်သွား သုံးလိုသောတိုကင်အသစ်ပေါ် ဘယ်(လက်ဝဲ)ဘက်ကလစ်(Left Click)လုပ်၊ ပြီးလျှင် ကာစာကို ဇယားပေါ်ပြန်ရွှေ့ ပြီး ယခင်ကတိုင်း ဘယ်(လက်ဝဲ)ဘက်ကလစ်(Left Click)လုပ်ခြင်းဖြင့် လောင်းနိုင်သည်။
ဇယားပုံမှ လောင်းထားသော အလောင်းအစားများကို ပြန်ပယ်ဖျက်လိုလျှင် CLEAR BETS ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ နောက်ဆုံး လုပ်ခဲ့သည့် အလောင်းအစားကို ပြန်ဖျက်လိုလျှင် UNDO ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ သတိထားရမည့်အချက်မှာ CLEAR BETS နှင့် UNDO ကို CONFIRM BET မလုပ်ခင်အချိန်တွင်သာ အသုံးပြုနိုင်သည်။ အကယ်၍ CLEAR BETS ကို နှိပ်လျှင် အဆိုပါအလောင်းအစားများကို အတည်မပြုတော့ဘဲ ကစားသမား၏အကောင့်ထဲသို့လည်း ထည့်သွင်းတော့မည် မဟုတ်ပါ။
ပြီးခဲ့သည့်အလှည့်က နံပါတ်နှင့်ငွေပမာဏ အတိုင်း လောင်းကစားလုပ်လိုလျှင် RE-BET ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
လောင်းထားသောအရာများအားလုံးကို ကစားသမား၏အကောင့်သို့ အတည်ပြုလိုလျှင် CONFIRM BET ခလုတ်ကို ဘယ်(လက်ဝဲ)ဘက်ကလစ်(Left Click) (၁)ကြိမ်နှိပ်ခြင်းဖြင့် အတည်ပြုနိုင်သည်။ CONFIRM BET ခလုတ်ကို နှိပ်ပြီးထားသော မည်သည့် အလောင်းအစားမဆို (သို့သော် လောင်းနိုင်သည့်သက်တမ်းမကျော်သေးသော အလောင်းအစားများသာ) ကို ဘယ်(လက်ဝဲ)ဘက်ကလစ်(Left Click)လုပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ထို့နောက်တွင် CONFIRM BET ကိုနှိပ်ရမည်။ ဤသို့မလုပ်လျှင် ထပ်ပေါင်းထည့်သော အလောင်း အစားများသည် ကစားသမားအကောင့်ထဲသို့ ဝင်မည်မဟုတ်ချေ။
ကစားသမားသည် ၎င်း၏တိုကင်များကို လောင်းရန် ရွေးချယ်သည့်နေရာပေါ်မူတည်ပြီး (၁)လှည့်တည်းတွင် နံပါတ်(၁)ခုမှ (၁၈) ခုအထိ လောင်း(ထိုး)နိုင်သည်။
ကစားသမားသည် တစ်ဦးတည်းကစားသည့် European Roulette ဇယားတွင် လောင်းကစားအမျိုးအစား(၈)မျိုးကို လောင်းနိုင်သည်။ အလောင်းအစား(၁)ခုစီတွင် နံပါတ်အတွဲလိုက် ပါဝင်ပြီး အလောင်းအစား(၁)ခုစီအတွက် နိုင်ငွေရရှိသည့်နှုန်းလည်းမတူပါ။ နံပါတ်(၃)ခုအတွက် လိုင်းအတိုများကို ဘုတ်ပေါ်ရှိ ရိုးလ်ဟုခေါ်ပြီး၊ နံပါတ်(၁၂)ခုအတွက် ပိုရှည်သောလိုင်းကို ကော်လံ ဟုခေါ်သည်။ နံပါတ်ပေါ်တင်ပြီး (သို့မဟုတ်) လိုင်းပေါ်တင်ပြီးလောင်းရသည့် ပထမလောင်းနည်း(၅)မျိုးကို အတွင်းလောင်းခြင်းများဟုခေါ်ပြီး ကျန်လောင်းကစားနည်း(၃)မျိုးကိုမူ ဘုတ်၏အစွန်း ပတ်ပတ်လည်ရှိအထူးအကွက်များတွင် ပြုလုပ်ထားပြီး အပြင်လောင်းခြင်းများဟုခေါ်သည်။ အဆိုပါ လောင်းနည်းများကို အောက်တွင် ဇယားပုံစံဖြင့် ဖော်ပြထားသည်။
ဇယားကို ၁၂x၃ အကွက်ချထားပြီး အနီနှင့်အနက် နံပါတ်(၃၆)ခုလုံးသည် စက်ဝိုင်းပေါ်တွင် ပေါ်နေပြီး ထိပ်ဆုံးတွင် (၀) သုည ရှိသည်။ ကစားသမားသည် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ မိမိလောင်းလိုသောနံပါတ်ရှိသည့်နေရာပေါ်တွင် လောင်းနိုင်သည်။ (ပုံတွင် (၂၃)ကိုလောင်းထားခြင်းဖြစ်သည်)
တည့်လောင်းခြင်း (ဒဲ့ လောင်းခြင်း သို့မဟုတ် နိုင်မည့်နံပါတ်တည့်တည့်ကိုလောင်းခြင်း) သည် နိုင်မည့်နံပါတ်တစ်ခုထဲကို သာရွေးပြီးလောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဖြစ်နိုင်သည့် နိုင်ကိန်း (၃၇) လုံးရှိသည်။ လောင်းချင်သည့် မည့်သည့်တိကျသည့်နံပါတ် အကွက်တွင်မဆို လောင်းနိုင်သည်။ အကယ်၍ ဘောလုံးရပ်နားသည့်နေရာသည် လောင်းထားသည့်နံပါတ်နေရာဖြစ်လျှင် လောင်းထားသည့်သူ နိုင်သည်။ အကယ်၍ဘောလုံးရပ်နားသည့်နေရာသည်အခြားနံပါတ်ဖြစ်လျှင် ရှုံးသည်။
ခွလောင်းခြင်းသည် နိုင်မည့်နံပါတ် (၂)ခု တွဲပြီးလောင်းခြင်း(၁)ခုအနေဖြင့် လောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဖြစ်နိုင်သည့် နိုင်တွဲ(၆၀)တွဲရှိသည်။ ဇယားရှိ ကပ်လျက်ရှိသော နံပါတ်များကို တွဲနိုင်သည်။ တစ်စောင်းတွဲ၍မရပါ။ မည်သည့်ကပ်လျက် နံပါတ်(၂)ခုကြားရှိ လိုင်းပေါ်တွင်မဆို လောင်းနိုင်သည်။ အကယ်၍ ဘောလုံးသည် အဆိုပါ နံပါတ်(၂)ခုထဲမှ တစ်ခုခုပေါ်တွင် ရပ်နားလျှင် ထိုအလောင်းအစား နိုင်သည်။ ထိုနံပါတ်(၂)ခုမဟုတ်သော အခြားနံပါတ်ပေါ်တွင် ဘောလုံးရပ်နားလျှင် ရှုံးသည်။
လမ်းပုံစံ လောင်းနည်းသည် နိုင်မည့်နံပါတ်(၃)ခုတွဲပြီးလောင်းနည်းဖြစ်သည်။ ဖြစ်နိုင်သည့် နိုင်တွဲ(၁၂)တွဲရှိသည်။ နံပါတ်(၃)ခုသည် ရိုးလ်(၁)ခုထဲပေါ်တွင် ရှိသောနံပါတ်များဖြစ်ရမည်။ နံပါတ်များရှိသည့် ရိုးလ်၏ဘယ်(လက်ဝဲ)ဘက်တွင် လိုင်းပေါ်တွင်ထားပြီး လောင်းနိုင်သည်။ အကယ်၍ ဘောလုံးသည် အဆိုပါ နံပါတ်(၃)ခုထဲမှ တစ်ခုခုပေါ်တွင် ရပ်နားလျှင် ထိုအလောင်းအစား နိုင်သည်။ ထိုနံပါတ်(၃)ခုမဟုတ်သော အခြားနံပါတ်ပေါ်တွင် ဘောလုံးရပ်နားလျှင် ရှုံးသည်။
ထောင့်လောင်းခြင်းသည် နိုင်မည့်နံပါတ်(၄)ခုတွဲပြီးလောင်းနည်းဖြစ်သည်။ ဖြစ်နိုင်သည့် နိုင်တွဲ(၂၂)တွဲရှိသည်။ ဇယားကွက်ပေါ်တွင် နံပါတ်(၄)ခုသည် ထောင့်(၁)ခုထဲတွင် လာဆုံနေသည့် အကွက်များပေါ်တွင် ရှိသောနံပါတ်များဖြစ်ရမည်။ ထိုနံပါတ်(၄)ခုစလုံးဆုံသည့် နေရာတွင်လောင်းနိုင်သည်။ အကယ်၍ ဘောလုံးသည် အဆိုပါ နံပါတ်(၄)ခုထဲမှ တစ်ခုခုပေါ်တွင် ရပ်နားလျှင် ထိုအလောင်းအစား နိုင်သည်။ ထိုနံပါတ်(၄)ခုမဟုတ်သော အခြားနံပါတ်ပေါ်တွင် ဘောလုံးရပ်နားလျှင် ရှုံးသည်။
သုညအကန့်တွင်လောင်းခြင်းသည် သုညအပါအဝင်နိုင်မည့် သီးသန့်နံပါတ်(၄)ခုတွဲပေါ်တွင် လောင်းနည်းဖြစ်သည်။ ဖြစ်နိုင်သည့် နိုင်တွဲ(၁)တွဲသာရှိသည်။ ထိုအတွဲမှာ ၀၊၁၊၂၊၃ အတွဲဖြစ်သည်။ အဆိုပါနံပါတ်(၄)ခုဆုံရာနေရာ ဘယ်(လက်ဝဲ)ဘက်တွင် လောင်းနိုင်သည်။ အကယ်၍ ဘောလုံးသည် အဆိုပါနံပါတ်(၄)ခုထဲမှ တစ်ခုခုပေါ်တွင် ရပ်နားလျှင် ထိုအလောင်းအစားနိုင်သည်။ ထိုနံပါတ်(၄)ခုမဟုတ်သော အခြားနံပါတ်ပေါ်တွင် ဘောလုံးရပ်နားလျှင်ရှုံးသည်။
သုညထောင့်ယူလောင်းခြင်းသည် သုညအပါအဝင်နိုင်မည့် သီးသန့်နံပါတ်(၃)ခုတွဲပေါ်တွင် လောင်းနည်းဖြစ်သည်။ ဖြစ်နိုင်သည့် နိုင်တွဲ(၂)တွဲ ရှိသည်။ ထိုအတွဲများမှာ ၀၊၁၊၂ အတွဲနှင့် ၀၊၂၊၃ အတွဲဖြစ်သည်။ အဆိုပါနံပါတ်(၃)ခုဆုံရာနေရာတွင် လောင်းနိုင်သည်။ အကယ်၍ ဘောလုံးသည် အဆိုပါနံပါတ်(၃)ခုထဲမှ တစ်ခုခုပေါ်တွင် ရပ်နားလျှင် ထိုအလောင်းအစား နိုင်သည်။ ထိုနံပါတ်(၃)ခုမဟုတ်သော အခြားနံပါတ်ပေါ်တွင် ဘောလုံးရပ်နားလျှင် ရှုံးသည်။
(၆)လိုင်းလောင်းခြင်းသည် နိုင်မည့်နံပါတ်(၆)ခုတွဲပေါ်တွင် လောင်းနည်းဖြစ်သည်။ ဖြစ်နိုင်သည့် နိုင်တွဲ(၁၁)တွဲ ရှိသည်။ နံပါတ်များသည် ဇယားပေါ်တွင် ကပ်လျက် ရိုးလ်(၂)ခုထဲရှိ နံပါတ်များဖြစ်ရမည်။ အဆိုပါရိုးလ်(၂)ခုဆုံရာနေရာ ဘယ်(လက်ဝဲ)ဘက်တွင် လောင်းနိုင်သည်။ အကယ်၍ ဘောလုံးသည် အဆိုပါ နံပါတ်(၆)ခုထဲမှ တစ်ခုခုပေါ်တွင် ရပ်နားလျှင် ထိုအလောင်းအစား နိုင်သည်။ ထိုနံပါတ်(၆)ခုမဟုတ်သော အခြားနံပါတ်ပေါ်တွင် ဘောလုံးရပ်နားလျှင် ရှုံးသည်။
ကော်လံလောင်းခြင်းသည် နိုင်မည့်နံပါတ်(၁၂)ခုတွဲပေါ်တွင် လောင်းနည်းဖြစ်သည်။ ဖြစ်နိုင်သည့် နိုင်တွဲ(၃)တွဲ ရှိသည်။ နံပါတ်များသည် ကော်လံ(၃)ခုထဲမှ (၁)ခုထဲတွင် ပါဝင်နေသော နံပါတ်များဖြစ်ရမည်။ ဇယားပုံစံ၏ အောက်ဘက်အဆုံးတွင်ပေးထားသော အကွက် နေရာတွင် လောင်းနိုင်သည်။ အကယ်၍ ဘောလုံးသည် အဆိုပါ နံပါတ်(၁၂)ခုထဲမှ တစ်ခုခုပေါ်တွင် ရပ်နားလျှင် ထိုအလောင်းအစား နိုင်သည်။ ထိုနံပါတ်(၁၂)ခုမဟုတ်သော အခြားနံပါတ်ပေါ်တွင် ဘောလုံးရပ်နားလျှင် ရှုံးသည်။
ဒါဇင်လောင်းခြင်းသည် နိုင်မည့်နံပါတ်(၁၂)ခုတွဲပေါ်တွင် လောင်းနည်းဖြစ်သည်။ ဖြစ်နိုင်သည့် နိုင်တွဲ(၃)တွဲ ရှိသည်။ နံပါတ်များသည် ဒါဇင်နေရာ(၃)ခုထဲမှ (၁)ခုထဲတွင် ပါဝင်နေသော နံပါတ်များဖြစ်ရမည်။ ဇယားပုံစံ၏ ဘယ်(လက်ဝဲ)ဘက် ပေးထားသော အကွက် နေရာတွင် လောင်းနိုင်သည်။ အကယ်၍ ဘောလုံးသည် အဆိုပါ နံပါတ်(၁၂)ခုထဲမှ တစ်ခုခုပေါ်တွင် ရပ်နားလျှင် ထိုအလောင်းအစား နိုင်သည်။ ထိုနံပါတ်(၁၂)ခုမဟုတ်သော အခြားနံပါတ်ပေါ်တွင် ဘောလုံးရပ်နားလျှင် ရှုံးသည်။
စုံကိန်း ဖြစ်နိုင်ချေကိုလောင်းခြင်းသည် နိုင်မည့်နံပါတ်(၁၈)ခုတွဲပေါ်တွင် လောင်းနည်းဖြစ်သည်။ ဖြစ်နိုင်သည့် နိုင်တွဲ(၆)တွဲ ရှိသည်။ ဇယားပုံစံ၏ ဘယ်(လက်ဝဲ)ဘက် ပေးထားသောအကွက်နေရာတွင် လောင်းနိုင်သည်။ အကယ်၍ ဘောလုံးသည်
(၁) နှင့် (၁၈) ကြား မည်သည့်နံပါတ်နေရာတွင်မဆို ရပ်နားလျှင် (၁ - ၁၈)အကွက်တွင် လောင်းသူ နိုင်သည်။
မည်သည့် စုံကိန်း နံပါတ်နေရာတွင်မဆို ရပ်နားလျှင် (စုံကိန်း)အကွက်တွင် လောင်းသူ နိုင်သည်။
မည်သည့် အနီရောင် နံပါတ်နေရာတွင်မဆို ရပ်နားလျှင် (အနီရောင်)အကွက်တွင် လောင်းသူ နိုင်သည်။
မည်သည့် အနက်ရောင် နံပါတ်နေရာတွင်မဆို ရပ်နားလျှင် (အနက်ရောင်)အကွက်တွင် လောင်းသူ နိုင်သည်။
မည်သည့် မ ကိန်း နံပါတ်နေရာတွင်မဆို ရပ်နားလျှင် (မ ကိန်း)အကွက်တွင် လောင်းသူ နိုင်သည်။
(၁၉) နှင့် (၃၆) ကြား မည်သည့်နံပါတ်နေရာတွင်မဆို ရပ်နားလျှင် (၁၉ - ၃၆)အကွက်တွင် လောင်းသူ နိုင်သည်။
အထက်ဖော်ပြပါနေရာများတွင် မဟုတ်ဘဲ အခြားနေရာများတွင် ရပ်နားလျှင် အထက်ပါ လောင်းခြင်းများ ရှုံးသည်။
၂.၄ Announced Bet
၂.၄.၁ Betting Area
၂.၄.၂ Finales Bets
Finales Bet Buttons
အနီ အနီရောင်နံပါတ်များအားလုံး လောင်းငွေ(၁)ဆ နိုင်ငွေ(၁)ဆ
အနက် အနက်ရောင်နံပါတ်များအားလုံး လောင်းငွေ(၁)ဆ နိုင်ငွေ(၁)ဆ
စုံ ကိန်း စုံ ကိန်းများအားလုံး လောင်းငွေ(၁)ဆ နိုင်ငွေ(၁)ဆ
မ ကိန်း မ ကိန်းများအားလုံး လောင်းငွေ(၁)ဆ နိုင်ငွေ(၁)ဆ
အနိမ့် ၁ မှ ၁၈ အထိ လောင်းငွေ(၁)ဆ နိုင်ငွေ(၁)ဆ
အမြင့် ၁၉ မှ ၃၆ အထိ လောင်းငွေ(၁)ဆ နိုင်ငွေ(၁)ဆ
ပထမ ဒါဇင် ၁ မှ ၁၂ အထိ လောင်းငွေ(၁)ဆ နိုင်ငွေ(၂)ဆ
ဒုတိယ ဒါဇင် ၁၃ မှ ၂၄ အထိ လောင်းငွေ(၁)ဆ နိုင်ငွေ(၂)ဆ
တတိယ ဒါဇင ၂၅ မှ ၃၆ အထိ လောင်းငွေ(၁)ဆ နိုင်ငွေ(၂)ဆ
ကော်လံအတွင်း လောင်းခြင်း ကော်လံ(၃)ခုရှိ မည့်သည့်ကော်လံထဲတွင် မဆို ပါဝင်သည့် နံပါတ်(၁၂)ခု လောင်းငွေ(၁)ဆ နိုင်ငွေ(၂)ဆ
ဒဲ့လောင်းခြင်း သုည အပါအဝင် မည်သည့် နံပါတ်(၁)ခုချင်းမဆို လောင်းငွေ(၁)ဆ နိုင်ငွေ(၃၅)ဆ
ခွလောင်းခြင်း ဇယားပေါ်ရှိမည်သည့်ကပ်လျက်နံပါတ်(၂)ခုမဆို လောင်းငွေ(၁)ဆ နိုင်ငွေ(၁၇)ဆ
လမ်းပုံစံလောင်းခြင်း ဇယား၌တစ်ရိုးလ်ထဲရှိမည်သည့်နံပါတ်(၃)ခုမဆို လောင်းငွေ(၁)ဆ နိုင်ငွေ(၁၁)ဆ
ထောင့်လောင်းခြင်း ထောင့်ဆုံလျက်ရှိသည့်မည်သည့်နံပါတ်(၄)ခုမဆို လောင်းငွေ(၁)ဆ နိုင်ငွေ(၈)ဆ
ရိုးလ်(၂)ခုကပ်လျက်ရှိသည့်မည်သည့်နံပါတ်(၆)ခုမဆို လောင်းငွေ(၁)ဆ နိုင်ငွေ(၅)ဆ
သုညအကန့်တွင်လောင်းခြင်း နိုင်မည့်သီးသန့်နံပါတ်(၄)ခုပါဝင်သည်။ သုညအကန့်တွင်လောင်းနိုင်သော အတွဲ(၁)ခုသာ ရှိသည်။ ထိုအတွဲမှာ ၀၊၁၊၂၊၃ အတွဲဖြစ်သည်။ လောင်းငွေ(၁)ဆ နိုင်ငွေ(၈)ဆ
သုညထောင့်ယူလောင်းခြင်း နိုင်မည့် သီးသန့်နံပါတ်(၃)ခုတွဲပေါ်တွင် လောင်းနည်းဖြစ်သည်။သုညထောင့်ယူလောင်းခြင်း (၂)ခုရှိသည်။ထိုအတွဲများမှာ ၀၊၁၊၂ အတွဲနှင့် ၀၊၂၊၃အတွဲဖြစ်သည်။ လောင်းငွေ(၁)ဆ နိုင်ငွေ(၁၁)ဆ
၂.၆ အနိမ့်ဆုံးလောင်းကြေး နှင့် အမြင့်ဆုံးလောင်းကြေး
အနိမ့်ဆုံးလောင်းကြေး နှင့် အမြင့်ဆုံးလောင်းကြေး ကန့်သတ်ချက်များကို ကစားသမားက ဝိုင်းတွင် ထိုင်လိုက်သည်နှင့် ဂိမ်းဇယားရှိ လောင်းကြေးသတ်မှတ်ချက်မီနူး (Bet Limits မီနူး) တွင် ဖော်ပြထားသည်။
၂.၇ စက်ဝိုင်း စတင်လှည့်ခြင်းနှင့် ရလဒ်ညွှန်ပြခြင်း
လောင်းရန်အချိန် သတ်မှတ်ချက် ကုန်သွားသည်နှင့် ဘောလုံးကိုလှည့်၍ ကစားခြင်းစတင်သည်။ ဘောလုံးသည်စက်ဝိုင်းပေါ်ရှိ နံပါတ်ကျင်းထဲတွင် မကျမီ အနည်း ဆုံး (၁၀)ပတ် လောက်လည်သင့်သည်။ ဘောလုံးသည် စက်ဝိုင်းပေါ်ရှိ ကျင်း(၁) ခုထဲ ကျသွားသည်နှင့် ထိုနံပါတ်ကို ကွန်ပျူတာမှဖတ်ပြီး ရလဒ်ကို ကစားသမား၏ ကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်တွင် ဖော်ပြမည် ဖြစ်သည်။
နိုင်သည့် နံပါတ်နှင့် နိုင်သည့်အလောင်းအစားများကို အမှတ်အသားဖြင့်အလေးပေးဖော်ပြမည်။ နိုင်သည့်အလောင်းအစားများသည် ၎င်းတို့အပေါ်တွင် အမှတ်အသားတိုကင်ထပ်ရမည်။ ရှုံးသည့်အလောင်းအစားများအားလုံးကို ယူပြီးနိုင်သည့်သူများကို ပေးမည်။ လောင်းကစားနိုင်လျှင် ကစားသမား၏ နိုင်ကြေးများအားလုံးကို ကြွေးကဒ်တွင် ထပ်ပေါင်းထည့်ပြီး ရရှိလာသည့် နောက်ဆုံးလက်ကျန်ကို နောက်ရွေးကစားမည့်ဂိမ်းတွင် (သို့မဟုတ်) ဂိမ်းခန်းမသို့ ပြန်ဝင်လျှင် ဖော်ပြပေးသည်။
ပီးခဲ့သည့်ပွဲများတွင် နိုင်ခဲ့သည့်နံပါတ်များ၏ မှတ်တမ်းကို ကစားသူ၏ဝင်းဒိုး ဘက်(လက်ဝဲ)ဘက်ထိပ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ အနိုင်မှတ်တမ်းဇယားတွင် အရောင်(၃)မျိုးရှိသည်။ အနက်သည် အနက်ရောင်နံပါတ်အစုနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ အနီသည် အနီရောင်နံပါတ်အစုနှင့်သက်ဆိုင်ပြီး၊ အစိမ်းသည် သုညအတွက်အရောင်ဖြစ်သည်။
၂.၈ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချွတ်ယွင်းမှုများ
အင်တာနက်ကော်နက်ရှင် (သို့မဟုတ်) ကွန်ပျူတာပြဿနာများအပါအဝင် ကစားသမားစက်၏မည့်သည့် ပျက်စီးမှုကြောင့်မျှ ဂိမ်းကစားသည့်ရလဒ်ကို ပြောင်းလဲ ပယ်ဖျက်မည်မဟုတ်ပါ။ ရီပို့ဆက်ရှင်တွင် ကစားသမားအနေဖြင့် မိမိတို့လောင်းထားသည့် မှတ်တမ်းကို စစ်ဆေးနိုင်သည်။
တိုက်ရိုက် ရိုလတ်ကစားနေစဉ် အော်ပရေတာစနစ်၏ မည့်သည့် SBOBET ကာစီနိုစနစ် ချွတ်ယွင်းချက် (သို့မဟုတ်) စက်ပစ္စည်းချို့ယွင်းမှုကို မဆို ပျက်ပြယ်လောင်းကစားဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ဝိုင်းကို ပိတ်လိမ့်မည်။
၂.၈ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချွတ်ယွင်းမှုများ
SBOBET ကာစီနိုတွင်လှည့်သူ (သို့မဟုတ်) ရိုလက်စက်ဝိုင်း၏ ချွတ်ယွင်းချက် တစ်ခုခုကြောင့် အမှားအယွင်းရှိခဲ့လျှင် ထိုအလှည့်သည် တရားမဝင်ကြောင်းကြေငြာခွင့်ရှိသည်။ မည်သည့် တိုက်ရိုက်ကစားသည့်ဂိမ်း ပတ်ဝန်းကျင်တွင်မဆို မှားလှည့်ခြင်းများ (ဥပမာ- ဘောလုံးသည် စက်ဝိုင်းထဲသို့မကျခြင်း ) မလွဲမရှောင်သာ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်း သတိပြုစေလိုပါသည်။ ထိုသို့မှားလှည့်ခြင်းဖြစ်လျှင် ဘောလုံးကို အစားထိုးပြီး ပြန်လှည့်ခြင်းဖြင့် အလောင်းအစားကို ပြန်လည်စတင်မည် ဖြစ်သည်။
ဘောလုံးသည် စက်ဝိုင်း ပေါ်ရှိ နံပါတ် ကျင်းထဲ မကျမီ အနည်းဆုံး (၁၀)ပတ် လောက်လည်သင့်သည်။ အနည်းဆုံး (၁၀) ပတ် မပြည့်ဘဲ ကျင်းဝင်သွားသော ဘောလုံးကိုပယ်ဖျက်မည်။ စက်ဝိုင်းအပြင်ဘက်တွင် ဘောလုံးကျသွားလျှင် လှည့်သူသည် ဘောလုံးကို ပြန်လှည့်ခြင်းဖြင့် အလှည့် တစ်ခု ကို ပြန်လည်စတင်မည်။
ဘောလုံးသည် စက်ဝိုင်းပေါ်ရှိ နံပါတ်ကျင်း၏ အပြင်ဘက်သို့ကျသွားလျှင် လှည့်သူသည် ဘောလုံးကို ပြန်လှည့်ပြီး အလှည့်တစ်ခုကို ပြန်လည်စတင်မည်။
၂.၁၀ မကျေနပ်မှုအပေါ် တိုင်ကြားချက်များ
အကယ်၍ ကစားသမားတစ်ဦးက ကာစီနိုဂိမ်းရလဒ်ကို မကျေနပ်၍တိုင်ကြားလိုလျှင် (သို့မဟုတ်) အငြင်းပွားလိုလျှင် အသုံးပြုသူ၏အိုင်ဒီ၊ ကစားသည့်အချိန်၊ ဖဲဝေသူ၏အမည်၊ ဝိုင်းနံပါတ်၊ အလှည့်နံပါတ် များပေးပြီး တိုင်ကြားမှု (သို့မဟုတ်) အငြင်းပွားမှုလုပ်နိုင်သည်။ ထိုသို့ မဆောင်ရွက်နိုင်လျှင် အော်ပရေတာမှငြင်းပယ် မကျေနပ်မှုတိုင်ကြားချက်များအဖြစ် ရှိနေလိမ့်မည်။ စက်ဝိုင်းလှည့်သည့် (ရိုလတ်) ဂိမ်းများအတွက် ဘောလုံးနှင့် စက်ဝိုင်းလှည့်ခြင်းများ၏ ဗွီဒီယိုပုံရိပ်များကို (၂၄)နာရီကြာ ထားရှိမည်ဖြစ်သဖြင့် ကစားသမားများသည် ၎င်းတို့၏ မကျေနပ်ချက်များကို (၂၄)နာရီအတွင်း တိုင်ကြား အငြင်းပွားရမည်ဖြစ်သည်။ (၂၄)နာရီနောက်ပိုင်းမှ ပြုလုပ်လာသော တိုင်ကြားချက်များကို SBOBET ကာစီနိုမှ မည်သည့်ရှင်းပြချက်မပေးဘဲ ပယ်ချလိမ့်မည်။
၃။ တိုက်ရိုက်ဆစ်ဘို ကစားခြင်း
ဤဂိမ်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အန်စာတုံး(၃)တုံး၏ရလဒ်ကို အောင်မြင်စွာလောင်းနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ စားပွဲ(ကစားဝိုင်း)တွင် လောင်းကစားပွဲများစွာကို ကစားနိုင်သည်။ ကစားသမားအနေဖြင့် အလေးသာမှုအမျိုးမျိုးတွင် (၁)ခုမှ(၅၀)ခုအထိ မည့်သည့်နေရာတွင်မဆို လောင်းနိုင်ရန်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည်။
တိုက်ရိုက်ဆစ်ဘို ကစားခြင်းတွင် ကစားသမားက အန်စာတုံးကို လှုပ်သူအဖြစ် ကစားသည်။ လှုပ်ရှားမှုနှင့်ရလဒ်များကို တိုက်ရိုက် အချိန်နှင့်တပြေးညီ၊ အလွယ်တကူ နားလည်နိုင်ပြီး ယုံကြည် စိတ်ချမှုရရှိစေရန် ကွန်ပျူတာက ဖန်တီးသည့် ပုံရိပ်များဖြင့် ဖော်ပြသည်။
အချိန်ကာလကြာလာသည်နှင့်အမျှဤဂိမ်းသည် ကစားသမားအား ပြုလုပ်ခဲ့သော လောင်းကြေးများစုစုပေါင်း၏ (၉၆.๐၆) ရာခိုင်နှုန်း၏ ပျမ်းမျှကို ပြန်ပေးကောင်းပေးနိုင်သည်။
၃.၂ ပါဝင်ကစားနည်း ညွှန်ကြားချက်များ
ကစားသမားတွင် အန်စာတုံး(၃)တုံး လှိမ့်သည့်ရလဒ်ပေါ်တွင် အလောင်းအစား (၅၂)ခုအထိလုပ်ရန် ရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည်။ ရလဒ်သည် အန်စာတုံး(၃)တုံး၏ရလဒ် ဂဏန်းတွဲများပေါ်တွင် အခြေခံပြီးလောင်းနိုင်သည့်နယ်ပယ်များအလိုက် ဆုံးဖြတ်မှုများကို အောက်ရှိ ဇယားနံပါတ်(၁)တွင် အကြမ်းဖျင်းဖော်ပြထားပြီး၊ ကစားသမားက လောင်းကစားနိုင်သော ဖြစ်နိုင်သည့်အလောင်းအစားများကို ဇယားနံပါတ်(၂)တွင် အကြမ်းဖျင်းဖော်ပြထားသည်။
ကစားသမား၏တိုကင်ကို ဂိမ်းဝင်းဒိုး၏ညာ(လက်ယာ)ဘက်အောက်ခြေတွင် အမျိုးအစားအလိုက် ပုံထားသည်။ လောင်းချင်လျှင် ကစားသမားသည် ကာစာ(mouse pointer) ကို ဂိမ်းဝင်းဒိုး၏ ညာ(လက်ယာ)ဘက်အောက်ထောင့်ရှိ တိုကင်ပြားပုံပေါ်တွင် မိမိ လောင်းလိုသောပမာဏကိုရွေးပြီး ဘယ်(လက်ဝဲ)ကလစ် (Left Click) လုပ်ပါ။ ပြီးလျှင် ကာစာ ကို ဇယားပေါ်ရှိ မိမိလောင်းချင် သော နေရာပေါ်ရွှေ့ပြီး ဘယ်(လက်ဝဲ)ကလစ် (Left Click) လုပ်ပြီး လောင်းနိုင်သည်။ ဤဂိမ်းစနစ်သည် နေရာအနေအထား မမှန်ကန်လျှင် ထိုတိုကင်ကို လောင်းခွင့်မပြုပါ။ တိုကင်သည် ကာစာအောက်တွင် အလိုအလျောက်ပေါ်နေလိမ့်မည်။ လောင်းသည့်ငွေ ပမာဏ လည်း ဝင်းဒိုး၏ဘယ်(လက်ဝဲ)ဘက်အောက်တွင် ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ထိုနေရာတွင်ပင် ဘယ်(လက်ဝဲ)ကလစ် (Left Click) (၁) ခါစီ လုပ်ခြင်းသည် ထို တိုကင်ရှိငွေပမာဏအတိုင်း ထိုနံပါတ်နေရာအတွက် သတ်မှတ်ထားသော အမြင့်ဆုံးလောင်းကြေး ရောက်သည်အထိ ထပ် ထပ်တိုးနေလိမ့်မည်။
အကယ်၍ ကစားသမားက ပမာဏ မတူညီသော လောင်းငွေတိုကင်ကို ပြောင်းလိုလျှင် ကာစာကို ဂိမ်းဝင်းဒိုး ညာ(လက်ယာ)ဘက် အောက်ရှိ တိုကင်ပုံပေါ်ပြန်သွား သုံးလိုသောတိုကင်အသစ်ပေါ် ဘယ်(လက်ဝဲ)ကလစ် (Left Click) လုပ်၊ ပြီးလျှင် ကာစာကို ဇယားပေါ်ပြန်ရွှေ့ ပြီး ယခင်ကတိုင်း ဘယ်(လက်ဝဲ)ကလစ် (Left Click) လုပ်ခြင်းဖြင့် လောင်းနိုင်သည်။
ဇယားပုံမှ လောင်းထားသော အလောင်းအစားများကို ပြန်ပယ်ဖျက်လိုလျှင် CLEAR BETS ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ နောက်ဆုံး လုပ်ခဲ့သည့် အလောင်းအစားကို ပြန်ဖျက်လိုလျှင် UNDO ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ သတိထားရမည့်အချက်မှာ CLEAR BETS နှင့် UNDO ကို CONFIRM BET မလုပ်ခင်အချိန်တွင်သာ အသုံးပြုနိုင်သည်။ အကယ်၍ CLEAR BETS ကို နှိပ်လျှင် အဆိုပါ အလောင်းအစားများကို အတည်မပြုတော့ဘဲ ကစားသမား၏အကောင့်ထဲသို့လည်း ထည့်သွင်းတော့မည်မဟုတ်ပါ။
လောင်းထားသောအရာများအားလုံးကို ကစားသမား အကောင့်သို့ အတည်ပြုလိုလျှင် CONFIRM BET ခလုတ်ကို ဘယ်(လက်ဝဲ)ကလစ် (Left Click) (၁)ကြိမ်နှိပ်ခြင်းဖြင့် အတည်ပြုနိုင်သည်။ CONFIRM BET ခလုတ်ကို နှိပ်ပြီးထားသော မည်သည့် အလောင်းအစားမဆို ၊(သို့သော် လောင်းနိုင်သည့်သက်တမ်းမကျော်သေးသော အလောင်းအစားများသာ) ကို ဘယ်(လက်ဝဲ)ကလစ် (Left Click) လုပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး အဲဒီနောက်တွင် CONFIRM BET ကိုနှိပ်ရမည်။ ဤသို့မလုပ်လျှင် ထပ်ပေါင်းထည့်သော အလောင်း အစားများသည် ကစားသမားအကောင့်ထဲသို့ ဝင်မည်မဟုတ်ချေ။
ဇယားနံပါတ်(၂)တွင် လောင်းကစားနိုင်သည့်နယ်ပယ်များကို ရည်ညွှန်းသည့်ပုံကို ဇယားနံပါတ်(၁)တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ဇယားနံပါတ်(၂)တွင် လောင်းကစားနိုင်သည့်နယ်ပယ်များကို ရည်ညွှန်းထားသည်။ လောင်းကစားနိုင်သည့်နယ်ပယ်များ တွင် လောင်းနိုင်သော လောင်းကစားအမျိုးမျိုးကို လောင်းကစားအကြောင်းအရာများတွင် ရှင်းပြထားသည်။
လောင်းကစားနိုင်သည့်နယ်ပယ်များတွင် လောင်းနိုင်သော လောင်းကစားအမျိုးမျိုး ၊ ဇယားနံပါတ်(၁)တွင် ပုံဖြင့်ဖော်ပြထား သည်ကို အောက်တွင် ရှင်းပြထားသည်။
ဂဏန်းတစ်လုံး လောင်းသည့် နံပါတ်နှင့် အန်စာတုံး(၁)ခုပေါ်ရှိနံပါတ်တူသည်။ လောင်းကြေး(၁)ဆ နိုင်ငွေ(၁)ဆ
လောင်းသည့် နံပါတ်နှင့် အန်စာတုံး(၂)ခုပေါ်ရှိနံပါတ်တူသည်။ လောင်းကြေး(၁)ဆ နိုင်ငွေ(၂)ဆ
လောင်းသည့် နံပါတ်နှင့် အန်စာတုံး(၃)ခုပေါ်ရှိနံပါတ်တူသည်။ လောင်းကြေး(၁)ဆ နိုင်ငွေ(၃)ဆ
အန်စာတုံး(၂)ခုအဖွဲ လောင်းသည့်နံပါတ်နှင့် အန်စာတုံး(၃)ခုတွင် (၂)ခုတူသည်။ လောင်းကြေး(၁)ဆနိုင်ငွေ(၅)ဆ
အန်စာ(၃)တုံးပေါင်းခြင်း (၄)သို့မဟုတ် (၁၇) အန်စာတုံး(၃)ခုစလုံး ပေါင်းခြင်းသည် (၄)သို့မဟုတ် (၁၇)နှင့်ညီသည်။ လောင်းကြေး(၁)ဆ နိုင်ငွေ(၅၀)ဆ
အန်စာ(၃)တုံးပေါင်းခြင်း (၅)သို့မဟုတ် (၁၆) အန်စာတုံး(၃)ခုစလုံး ပေါင်းခြင်းသည် (၅)သို့မဟုတ် (၁၆)နှင့်ညီသည်။ လောင်းကြေး(၁)ဆ နိုင်ငွေ(၃၀)ဆ
အန်စာ(၃)တုံးပေါင်းခြင်း (၆)သို့မဟုတ် (၁၅) အန်စာတုံး(၃)ခုစလုံး ပေါင်းခြင်းသည် (၆)သို့မဟုတ် (၁၅)နှင့် ညီသည်။ လောင်းကြေး(၁)ဆ နိုင်ငွေ(၁၈)ဆ
အန်စာ(၃)တုံးပေါင်းခြင်း (၇)သို့မဟုတ် (၁၄) အန်စာတုံး(၃)ခုစလုံး ပေါင်းခြင်းသည် (၇)သို့မဟုတ် (၁၄) နှင့်ညီသည်။ လောင်းကြေး(၁)ဆ နိုင်ငွေ(၁၂)ဆ
အန်စာ(၃)တုံးပေါင်းခြင်း (၈)သို့မဟုတ် (၁၃) အန်စာတုံး(၃)ခုစလုံး ပေါင်းခြင်း သည်(၈)သို့မဟုတ် (၁၃)နှင့်ညီသည်။ လောင်းကြေး(၁)ဆ နိုင်ငွေ(၈)ဆ
အန်စာ(၃)တုံးပေါင်းခြင်း (၉)သို့မဟုတ် (၁၂) အန်စာတုံး(၃)ခုစလုံး ပေါင်းခြင်းသည် (၉)သို့မဟုတ် (၁၂)နှင့်ညီသည်။ လောင်းကြေး(၁)ဆ နိုင်ငွေ(၆)ဆ
အန်စာ(၃)တုံးပေါင်းခြင်း (၁၀)သို့မဟုတ် (၁၁) အန်စာတုံး(၃)ခုစလုံး ပေါင်းခြင်းသည် (၁၀)သို့မဟုတ် (၁၁)နှင့်ညီသည်။ လောင်းကြေး(၁)ဆ နိုင်ငွေ(၆)ဆ
နံပါတ်(၂)ခုတူ အန်စာတုံး(၃)ခုတွင် နံပါတ် (၂) ခုတူညီသည်။ လောင်းကြေး(၁)ဆ နိုင်ငွေ(၈)ဆ
နံပါတ်(၃)ခုတူ အန်စာတုံး(၃)ခုတွင် နံပါတ် (၃) ခုလုံး တူညီသည်။ လောင်းကြေး(၁)ဆ နိုင်ငွေ(၂၄)ဆ
သတ်မှတ် နံပါတ်(၃)ခု တူ လောင်းသည့်နံပါတ်နှင့် အန်စာတုံး(၃)ခုတွင် (၃)ခုလုံးတူသည်။ လောင်းကြေး(၁)ဆ နိုင်ငွေ(၁၅၀)ဆ
အန်စာတုံး(၃)ခုပေါင်းခြင်းသည် (၄) မှ (၁၀) အတွင်းနှင့် ညီသည်။ ( သုံးထပ်ကွမ်းအရှုံး) လောင်းကြေး(၁)ဆ နိုင်ငွေ(၁)ဆ
စုံကိန်း အန်စာတုံး(၃)ခုပေါင်းခြင်းသည် ဂဏန်း(၃)လုံးတူမှလွဲ၍ စုံ ကိန်းရသည်။ ( သုံးထပ်ကွမ်းအရှုံး) လောင်းကြေး(၁)ဆ နိုင်ငွေ(၁)ဆ
အကြီး အန်စာတုံး(၃)ခုပေါင်းခြင်းသည် (၁၁) မှ (၁၇) အတွင်းနှင့် ညီသည်။ ( သုံးထပ်ကွမ်းအရှုံး) လောင်းကြေး(၁)ဆ နိုင်ငွေ(၁)ဆ
မ ကိန်း အန်စာတုံး(၃)ခုပေါင်းခြင်းသည် ဂဏန်း(၃)လုံးတူမှလွဲ၍ မ ကိန်းရသည်။ ( သုံးထပ်ကွမ်းအရှုံး) လောင်းကြေး(၁)ဆ နိုင်ငွေ(၁)ဆ
၃.၅ အနိမ့်ဆုံးလောင်းကြေး နှင့် အမြင့်ဆုံးလောင်းကြေး
အနိမ့်ဆုံးလောင်းကြေး နှင့် အမြင့်ဆုံးလောင်းကြေး ကန့်သတ်ချက်များကို ကစားသမားက ဝိုင်းတွင် ထိုင်လိုက်သည်နှင့် ဂိမ်းဇယားရှိ လောင်းကြေးသတ်မှတ်ချက် မီနူး (Bet Limits မီနူး) တွင် ဖော်ပြထားသည်။
၃.၆ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချွတ်ယွင်းမှုများ
အကယ်၍ တိုက်ရိုက် အန်စာပစ်သည့် ဆစ်ဘို ဂိမ်းတွင် အီလက်ထရောနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြသရန် ချွတ်ယွင်းခဲ့လျှင် ရလဒ်ကို အန်စာတုံးအစစ်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်မည်။
အင်တာနက်ကော်နက်ရှင် သို့မဟုတ် ကွန်ပျူတာပြဿနာများအပါအဝင် ကစားသမားစက်၏မည့်သည့် ပျက်စီးမှုကြောင့်မျှ ဂိမ်းကစားသည့်ရလဒ်ကို ပြောင်းလဲ ပယ်ဖျက်မည်မဟုတ်ပါ။ ရီပို့ဆက်ရှင်တွင် ကစားသမားအနေဖြင့် မိမိတို့ လောင်းထားသည့် မှတ်တမ်းကို စစ်ဆေးနိုင်သည်။
တိုက်ရိုက်ဆစ်ဘိုကစားနေစဉ် အော်ပရေတာစနစ်၏ မည့်သည့်ချွတ်ယွင်းချက် (သို့မဟုတ်) စက်ပစ္စည်းချို့ယွင်းမှုကိုမဆို ပျက်ပြယ်လောင်းကစားဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ဝိုင်းကို ပိတ်လိမ့်မည်။
၃.၇ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချွတ်ယွင်းမှုများ
အကယ်၍ လူ (သို့မဟုတ်) စက်ကြောင့် အန်စာတုံးလှုပ်နေစဉ် (သို့မဟုတ်) လှိမ့်နေစဉ် အမှားအယွင်းတစ်ခုခု ဖြစ်ခဲ့လျှင် ထိုသို့ အန်စာတုံးလှုပ်မှု (သို့မဟုတ်) လှိမ့်မှုသည် တရားမဝင်ကြောင်းကြေငြာခွင့်ရှိသကဲ့သို့ အဆိုပါ အန်စာတုံးကို ပြန်ပြီး လှုပ်ခွင့် လှိမ့်ခွင့်ရှိသည်။
၃.၈ မကျေနပ်မှုအပေါ် တိုင်ကြားချက်များ
The object of the game is to make the total point value of the Player’s hand of cards exceed the total point value of the House hand of cards, without exceeding 21. Whoever has the best hand wins the game.
If the Player’s first two cards are of equal value, they are calledapair. This allows the Player the opportunity to play two hands and win twice. The SPLIT button in the game window will illuminate to advise the Player that this option is available. The Player may now left-click on this button and an additional bet will be placed alongside the initial bet, which is fixed atavalue equal to the initial bet. If the Player’s decides to Split the pair, one card will be dealt automatically to the first of the two Split hands. The Player will then have the option to draw additional cards until that hand is completed, using the HIT, DOUBLE or STAND buttons. If the Player decides not to Split the pair, the game continues as normal.
Any Operator system malfunction and/or hardware failure during Live Blackjack will void the play and the particular table will be closed. All bets will be returned irrespective of the result.
In the event of any cards being revealed during shuffling, the dealer will reshuffle the cards before putting them into the shoe box.
အော်ပရေတာသည် အထက်ဖော်ပြပါ မည်သည့် ဥပဒေသများကိုမဆို စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအရ လိုအပ်လျှင် အချိန်မရွေး ပြောင်းပိုင်ခွင့်ရှိသည်။